Nantoni na i-home aquarium isebenza-into eyenziwe yintyatyambo eyingxenye yezinto zangaphakathi, okanye into yokuzilibazisa yelinye lamalungu entsapho, okanye mhlawumbi zombini-inokubangela ukuba abantu banakekele njalo. Emva kwakho konke, umphumo oshukumisayo usebenza ngentlanzi, ehamba ngokukhawuleza okanye ngokukhawuleza emanzini acacileyo, ehamba ngokukhawuleza.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba amanzi, azaliswe yi-aquarium, kufuneka ukuba yinto ecacileyo. Emva kwayo yonke into, i-liquid ye-turbid kunye neendwangu zeglasi ezigqithisiweyo kunye ne-greenish liquid zenza into engabonakaliyo. Imifanekiso efanayo, eqinisweni, inokudibana rhoqo. Le ngxaki inokujamelana kuphela nabasandul 'ukuza kule ngxaki, abangazi ukuba njani kule meko. Makhe siqwalasele ezinye iingcebiso, eziza kubancedisa abaqalisi kwi-aquarium ishishini ukujongana nokucocwa kwamanzi.
Ingxaki yokuqala apho umntu onokuqala adibana nayo i-algae ekhula kwiindonga ze-aquarium. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ingozi kwinkqubo ye-aquarium yakho yezinto eziphilayo, ayithwali, kodwa ke, ukuphanga umfanekiso jikelele kwaye wenze kube nzima ukuphonononga. Ngoko ke kubaluleke kakhulu ukucocelela iindonga ze-algae rhoqo, malunga nanye ngeveki okanye ezimbini. Akunzima ukwenza ezi zenzo. Ukufeza le njongo kuyimfuneko ukusebenzisa izicucu ezikhethekileyo. Kwimeko apho ungayenzi le nto yokuthenga, uya kuba nako ukunceda isiponji esilungiselelwe ukuhlamba izitya, i-razor blade okanye ikhadi leplastiki. Ukuba i-aquarium yakho yenziwe nge-plexiglass, kuphela isiponji esitsha sokutya singasetyenziselwa ukuphepha ukukhawulwa kwindonga. Kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba i-aquarium yakho yinkqubo engqongileyo yemvelo echaphazela nayiphi na impembelelo yangaphandle. Kukulungele ukusebenzisa i-scraper ekhethekileyo, kukhetha ukukhetha i-scraper magnetic.
Isinyathelo esilandelayo kukucoca phantsi kwe-aquarium, umhlaba wayo, i-siphon yomhlaba. Ngaphantsi kwe-aquarium, kulo lonke ubomi beentlanzi zakho, banokubuthelela ukuhamba kwawo, okufuneka kususwe ngexesha eliqhubekayo. Oku kungenziwa ngepayipi ekhethekileyo, ene-tip ethize. Ungayithenga kwivenkile ekhethekileyo. Kufuneka kuqatshelwe ukuba ububanzi bebhasi kufuneka ibe nomlinganiselo apho yonke inkunkuma ingadlula ngokukhululekile.
Qinisekisa ukuba ingaba lixesha lokucoca i-aquarium, unako ngoncedo lokulima umhlaba. Kwimeko apho kungekho zibhobho, ngoko kusasa kakhulu ukwenza i siphon. Kwaye xa kwenzeka ukuba zikhona, ngoko, ngokusebenzisa ipayipi, qhubeka uqokelela yonke inkunkuma. Kule meko, kuyimfuneko ukucoca nje kuphela umhlaba womhlaba, kuyafuneka kwakhona ukuqokelela ukungcola ngaphakathi.
Amanzi kufuneka ukuba utshintshwe rhoqo kwi-aquarium. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba kwi-aquarium, amanzi akatshintshi ngokupheleleyo, kuba oku kunokubeka uxinzelelo kubo bonke abemi beendawo. Ucoceko kufuneka lugcinwe ngokufaka amanzi rhoqo. Njengomthetho, le nkqubo iyazama ukudibanisa ne-ssiphon yomhlaba. Kwinkqubo enye, malunga neepesenti ezingamatshumi amathathu zamanzi utshintshiweyo ukusuka kumthamo opheleleyo we-fluid. Kubaluleke kakhulu ukuba amanzi kufuneka ahlaliswe phambi kweentsuku ezimbini okanye ezintathu.
Okwangoku, zonke izixhobo zamanzi zixhotyiswe zizihlungi ezinokukwazi ukucoca uluhlu lwefayile kuphela, kodwa kwakhona ukulungelelanisa ngexesha elifanayo. Ukusebenza kakuhle, iifayile kufuneka zihlambuluke rhoqo. Ukuhlambuluka kulandela iifayili ezikhethekileyo zefayili, ezibukeka njenge-sponge. Ngethuba lokusebenza, ifreyulisi iqokelela ukungcola ngokwayo, echithwa emanzini. Ifayile kufuneka ihlanjwe njengoko kuyimfuneko, enokuthi ilandelwe kwinto yayo. Kwimeko apho amanzi aguquka kakubi, kunokugqitywa ukuba ucwecwe luvaliwe kwaye lixesha lokulihlambulula. Kwifayile ekhompyutheni yerobhothi emele ikhutshwe kwaye ihlanjwe ngaphantsi komlambo ococekileyo wamanzi. Kodwa kulungele ngakumbi ukuwuhlanza emanzini owukhuphayo kwi-aquarium ukuze uyitshintshe. Kubalulekile ukukhumbula ukuba akuvumelekanga ukusebenzisa naluphi na uhlobo lokuhlanza.
Emva kokuba uhlambe i-liner, kuyimfuneko ukucoca iifowuni zeplastiki, kunye nentloko kunye nombhobho. Oku kunokwenziwa ngebrush yangasese kodwa yangaphambili. Kufuneka ukuba uhlambe ngokucophelela zonke izakhiwo.
Intlanzi, ikwazi ukucoca i-aquarium
Kukho iintlanzi ezingenakuvuyela kuphela iso ngekhontrakthi yazo, kodwa ziyakwazi ukucoca i-aquarium. Ukugqithisa okukhulu phakathi kwala "bahlambululi" banikezelwa kubathwali abancinci, abaphiwa ngamagosi, i-pecilia, i-guppies kunye nee-mollies. Abameli beentlanzi banesakhiwo esicacileyo somlomo. Umhlathi ophantsi uphuhliswa ngokukodwa, njengoko kungumsebenzi we-scraper, apho i-plaque isuswa kwiindonga kunye ne-dnaakvarium, kunye nakwizityalo eziphilayo.
Kananjalo, ngokuphindaphindiweyo njengeentlanzi ezisetyenziswayo zisetyenziselwa iintsimbi, ezizikhuselekileyo. Ukuzikhethela kwezixhobo ze-ichthyod kukuba unomhlobo we-sucker, ngoncedo lwaphi ukunyakaza olwenziwa kunye neendonga ze-aquarium. Ngoncedo lwamagqabi athile, i-catfish yenziwa kwakhona ukususa ukuhlaselwa kohlobo lwe-organic, okuyinto yokutya. Ngaloo ndlela, kunokugqitywa ukuba intlanzi enokuthi ifumaneke ngokukhuselekileyo ukuze incede ihlambulule i-aquarium.
Kule nqaku sichaze ngokufutshane imigaqo efunekayo ekufuneka igcinwe xa ihlambulula i-aquarium. Le ngcaciso ayigqibekanga. Ngokuhamba kwexesha, emva kokuba uqale ukusebenza njenge-saquarium, uya kufunda ukuhlula xa ufuna ukuqala ukucoca okanye xa ufuna ukutshintsha amanzi.
Ngaba kunokwenzeka ukuthatha ikati ngohambo?
I-ice cream ekrakra kwi tsholethi
Yogalosofiya: indlela yokufumana umfanekiso kaVictoria Beckham
UKsenia Borodina wazala intombazana
Iipropathi zokwelapha ze-flower pollen
Ukukhulisa umntwana ngokufanelekileyo
Inkukhu yengqumbo yenkukhu. Ukupheka kweenkukhu ebisiweyo